အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - Wisycom ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှော / Boom အော်ပရေတာကိုအာဒံ Bloch များအတွက်အဝေးသင်တတ်၏။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
Home » သတင်း » Wisycom ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှော / Boom အော်ပရေတာကိုအာဒံ Bloch များအတွက်အဝေးသင်သွား
Wisycom ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှော / Boom အော်ပရေတာကိုအာဒံ Bloch များအတွက်အဝေးသင်သွား
ကျွဲ, နိုဝငျဘာ 7, 2018 - ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှော / အော်ပရေတာကိုအာဒံ Bloch Boom မကြာသေးမီကနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများ Buffalo အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးအသင်းလေ့ကျင့်ရေးစခန်းကိုကြည့်ဘို့အသံ In-သင့်ရဲ့-မျက်နှာလုံးကို Hard-ရိုက်ပုတ်တဲ့ဖမ်းဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့ခဲ့သည်။ မည်သည့်ဆွေးနွေးမှုပျောက်ဆုံးမဟုတ်စဉ်အဖြစ်အနည်းဆုံးထိုးဖောက်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်, Bloch ဟာ, သူ့နောက်ဆုံးပေါ်ကြိုးမဲ့ RF ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်မှီခို Wisycom MCR42S Dual-မတူကွဲပြားခြင်း Wideband လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Mini ကို Receiver စနစ် နှင့် MTP41S Wideband Bodypack transmitter.
Bloch ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်အတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ကနဦးကလေးမွေးစားခြင်းတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကုမ္ပဏီသံအမတ်၏အတန်ငယ်ဖြစ်လာခဲ့သူစက်မှုလုပ်ငန်းမိတျဆှေမြားနှငျ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Randy Sparrazza က Wisycom မှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ "ကျွန်မနေတဲ့အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်အပေါ် Randy နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့, သူဂီယာကိုအသုံးပြုရန်ငါ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်, သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ" Bloch ကပြောပါတယ်။ "အလုံအလောက်သေချာတာပေါ့, အရမ်းသဘောကျခဲ့တယ်။ အဘယ်အရာကိုထိပ်ကျော် Wisycom ကိုထည့်လေ့မရှိသူကငါ့အဘို့ကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သောနှစ်ဦးစလုံးလိုင်းများပေါ်တွင်စစ်မှန်သောမတူကွဲပြားမှု, ကမ်းလှမ်းကြောင်းတည်းသောကုမ္ပဏီဖွင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်ဝေးငါသိသည်အတိုင်း, သင်တို့ကိုမဆိုအခြားအမှတ်တံဆိပ်မပွုနိုငျရာ, သင်သည်သင်၏အသံအရည်အသွေး tweaks နိုင်သည်ကိုနည်းနည်းနည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ Wisycom အမှန်တကယ်ငါ့အလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ "
စိန့်ဂျွန် Fisher ကကောလိပ်မှာအရပျကိုလုယူသောသင်တန်းစခန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည် Bloch အဆိုပါနည်းပြ '' ရုံးများ, ယင်းပါတီ, ရုပ်ရှင်ဘူတာအတှငျးမှအသံများအပြင်၌, နေ့စဉ်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းခဲ့သုံးခုဘောလုံးလယ်ကွင်းအနှံ့ကနေယုံကြည်စိတ်ချရသောအသံသည်ကိုဖမ်းယူခဲ့ရတယ် နှင့်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားကျောင်းဝင်းနေရာများတွင်။ Bloch သုံးခုလယ်ကွင်းနှစ်ခုအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းမှာမိမိအသံရပ်တည်ချက် positioned ။ သူကအင်တာနာအသီးအသီးသောလယ်ဆင်းထောက်ပြခြင်းနှင့်မဆိုပေးထားယခုအချိန်တွင်ရိုက်ကူးလျက်ရှိခဲ့ရာပေါ် မူတည်. အဆိုပါ MICS ကွာသည်သူ၏ဘူတာရုံကနေခွကေို 300 ဖို့များသောအားဖြင့် 450 ခဲ့ကြသည်အသုံးပြုသွားမည်။ mic'd စဉ်ကစားသမားယင်းပါတီမှဦးမယ်လို့နှင့် Bloch နေဆဲအသံဖမ်းယူနိုင်သည့်အခါပင်ကြိမ်ရှိခဲ့သည်။
"တောင်မှကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများ, အုတ်နံရံများနှင့်အကွာအဝေးထက်ပို 700 ခွကေိုမှတဆင့်အစဉ်မပြတ်ငါသူတို့စကားကိုနားထောင်နိုင်," Bloch ကထပ်ပြောသည်။ ကင်မရာအော်ပရေတာကိုလယ်ပဲအခြားဘက်ခြမ်းမှရလိမ့်မယ်သောအခါ "တကယ်တော့သူတို့မရှိတော့သူတို့ရဲ့စနစ်အားဖွငျ့အကြှနျုပျစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲကစားသမားကိုနားထောငျနိုငျတယျ။ ဒါက Wisycom ဂီယာဘယ်လောက်ကောင်းပါတယ်။ "
အသံကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသုညကျောင်းထွက်ရှိပါတယ်အဖြစ် Bloch အဆိုအရ Wisycom နှင့်ပြိုင်ဘက်အမှတ်တံဆိပ်များအကြားခြားနားချက် "နေ့ညဉ့်မပြတ်" ဖြစ်ပါတယ်။ "ငါ့ Wisycom ဂီယာနှင့်အတူ, ငါကိုအသုံးပြုရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိမ်နှုန်းကိုမတှေ့နိုငျရှိရာတည်နေရာကိုရှာဖွေရသေးရှိသည်," ဟုသူကဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ ရေကန်အီရီနှင့်ရေကန်အွန် - - ကြောင်းအဲန်ဂျီအိုများကြိမ်နှုန်းနိုင်နဲ့ audio ကိုဖမ်းယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စေ "ဒါကရေဒီယိုအာကာသနှင့်ရေအိမ်နီးချင်းအလောင်းတွေစည်ကားသော Buffalo နှင့် Rochester ငါ့အိမ်မှာအခြေစိုက်စခန်းအတွက်အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာပါပဲ။ ဤအအလားအလာများ၏စွက်ဖက်မှုများကဝိုင်းရံခံရစဉ်ကနေရှေးခယျြဖို့ Wisycom ရဲ့အာဏာနှင့်အကွာအဝေးထားရှိခြင်းနှင့်နေဆဲ 700 ခွကေိုကွာနေတဲ့အဆောက်အဦးထဲအသံတွေဖမ်းယူနိုင်ဖြစ်ခြင်း, မှော်ဖြစ်၏။ "
Bloch တစ်ဦးနှင့်အတူ, Sanken cos-42 နှင့်တစ်နိုင်ငံ B41 lavalier မိုက်ခရိုဖုန်း, Sennheiser MKH 11 ShotGun မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် Audix SCX-3HC ငွေ့ရည်ဖွဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့သူ့ရဲ့ Wisycom MCR416S အသံဖမ်းခြင်းနှင့် MTP1s က transmitter ကို support အသံဖုန်းများအတွက် 688 SL-6 ရောနှော / အသံဖမ်း။ ထို့အပြင်သူသည် K-Tek စန်းထမ်းဘိုး, ရောနှောအိတ်, ထဲကနေအလားတူနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ယင်း၏အကွာအဝေး, ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အပြင်, Bloch လည်း Wisycom ရဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားကြိုက်နှစ်သက်သည်။ "သင်ထားတဲ့လက်မ၏လေးပုံတပုံဟာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်စေသည်ပေမယ် MTP41 ၏အသေးစားပုံစံအချက်ကြောင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အိတ်ကပ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေသည်စဉ်းစားကြဘူး," Bloch ကပြောပါတယ်။ "ငါသည်အတိတ်ကာလများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြအခြားသူများကိုတက်အပူလေ့သော်လည်းအဆိုပါ MTP41s လည်းပူမရကြဘူး။ "
လေ့ကျင့်ရေးစခန်းအတွင်းတစ်လလျှင်ဖြုန်းပြီးနောက်, တဦးတည်းအရာ Bloch ရန်အလွန်ရှင်းလင်းသောဖြစ်လာသည်။ "ငါသည်ယခု Wisycom က transmitter နှင့်ဂီယာနေဆဲပဲဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဝတ်ထားစဉ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားသမားဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ တစ်ဦး Pre-ရာသီဂိမ်းစဉ်အတွင်း mic'd သောကစားသမားတဦးတည်းကယ့်ကိုခက်ခဲထိမှန်ခဲ့သည်။ သူကညာဘက်ကိုမိုက်ကရိုဖုန်းဗူးပေါ်ဆင်းသက်သူတောင်မှဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာသူ၏ပခုံး pads ကိုချွတ်မရနိုင်တော့ဤမျှလောက်နာကျင်မှု၌ရှိ၏။ သို့သော်ယင်း Wisycom ပစ္စည်းကိရိယာများမဆိုဖို့လုံးဝပျက်စီးခြင်းရှိ၏။ "
နီးပါးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအဘို့, Bloch feature ကိုရုပ်ရှင်, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်လက်တွေ့ဘဝတီဗီဘဏ်ဍာအမျိုးမျိုးများအတွက်အသံရောနှောနှင့်စန်းအော်ပရေတာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ မိမိအမကြာသေးမီခရက်ဒစ်အကြားရှိပါတယ်ပါဝင်သည် lockup ပြီးနောက်မတ်ေတာသညျ, Treehouse မာစတာ, အေး Brook, မုတ်ဆိုးမတို့ကိုပွိုင့် နှင့် အမေရိကားရဲ့အများစုကကြောက်စရာနေရာများများစွာသောအခြားသူတွေအကြား။ Bloch အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ dpagan ဆက်သွယ်ရေး လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် wisycom	2018-11-08
ယခင်: ATEME Bandwidth ချွေတာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနအမြင့်ဆုံးမှ VSTV K + ဖွင့်မည်
နောက်တစ်ခု: Telestream Encoding ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာရရှိနိုင် V-Nova PERSEUS Plus အား
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2018 (252) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (398) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Wisycom ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှော / Boom အော်ပရေတာကိုအာဒံ Bloch များအတွက်အဝေးသင်သွား" ။ https://www.broadcastbeat.com/wisycom-goes-the-distance-for-production-sound-mixerboom-operator-adam-bloch/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။